Maalinta: Ogast 3, 2018
Saldhigga Anamur Bus
Degmada Anamur ee gobolka Mersin, oo muddo dheer la sugayey iyo dhismaha Mersin Metropolitan Municipal Bus Terminal wuxuu bilaabay inuu dhammaado. Dhismaha Saldhigga Basaska, kaas oo qaadi doona hawl muhiim u ah gadiidka isku xidhaya magaalada Anamur, [More ...]
Ka Horeeya Gaadiidka Magaalooyinka ee Ortaca
Dowladda hoose ee Magaalada Muğla si ay u hesho gaadiid ku habboon magaalada oo ah muwaaddiniinta ku nool Ortaca ayaa horay looga codsaday muwaadiniinta khadka magaalada. Tan iyo markii la aasaasay muwaadinku nabad iyo daryeel [More ...]
Sameynta Nidaamka Ammaanka Nabadgelyada ee Warshadda Cerrida ee Cankirka
Samaynta Nidaamka Kaamiradda Amaanada ah ee Agaasinka Plant Agaasinka Çankır The Qiimaha jilicsan ee Agaasimaha Guud ee Shirkadda Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) wuxuu leeyahay xaddidan xNUMX / 2018 GCC oo leh xaddidan xNUMX TL iyo qiime u dhow 372349 TL. [More ...]
Mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee Metro Istanbul si loo wanaajiyo tayada adeegga ee ganacsiga diiradda iyo gaadiidka dadweynaha waa Khariidadda Iskuxirka Nidaamka Tareenka ee laga qaado dhammaan saldhigyada, gawaarida iyo websaydhada Metro Istanbul. [More ...]
DurmazlarTaageerada qaybta Nidaamka Tareenka
8, oo ay ku jiraan shirkadaha ka shaqeeya waaxda mashiinka. iyo 35. Isaga oo ka hadlaya Shirka Falanqaynta ee la Fidiyay ee Guddiyada Aqoonyahannada, Cüneyt Şener, oo ah Guddoomiye kuxigeenka Gudiga Agaasinka ee BTSO, wuxuu cadeeyay in maalgashadayaasha inbadan oo ka tirsan TEKNOSAB ay matalaan wakiilada qeybta mashiinada. [More ...]
Laga soo bilaabo madaxweyne Turel ilaa tareenka xawaaraha sare ee Alanya
Duqa magaalada Antaya Manderes Türel, isagoo siinaya warka wanaagsan ee tareenka xawaaraha dheer, "Tareenka xawaaraha sare wuxuu ku gaari doonaa Antalya isagoo maraya Manavgat dhanka Antalya hal lugna wuxuu ku laaban doonaa Alanya halkaan," ayuu yiri Antaya. [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa APAYDIN, 01 August 2018 Arbacadii, kuxigeenka Maareeyaha Guud İsmail. H. Murtazaoğlu oo wada saraakiil kale oo la Turkey baabuur Industry Inc. (TÜVASAŞ) baaritaanka laga helay. APAYDIN ​​inta lagu jiro imtixaanaadka [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın Imtixaanka Dogancay Ripaji
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa APAYDIN ​​wuxuu baaritaan ku sameeyay Doğançay Ripajı ee Sakarya. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa APAYDIN, 01 August 2018 Arbacadii, kuxigeenka Maareeyaha Guud İsmail. H. MURTAZAOĞLU iyo mas'uuliyiinta kale [More ...]
Guddoomiyaha Sivas Davut Gül wuxuu booqday TÜDEMSAŞ iyada oo loo fiirinayo booqashadiisa xarumaha dowliga ah iyo ururada. Kulankaas, kuxigeenka maareeyaha guud Mehmet Başoğlu iyo gudoomiye kuxigeenka Davut Gül ayaa xubnaha saxaafada ka waydiiyey TUDEMSAEM [More ...]
Dhiirigelinta sare si loo soo saaro gawaarida nidaamka tareenada
Mashaariicda waaweyn ee lagu abaalmarinaayo Mashruuca Ku-saleysan Kaalmeedka Gobolka ayaa lagu soo daabacay maanta Gazette Rasmiga ah. Waxaa la go’aamiyay in la siiyo kaalmada gobolka maalgashiga 4. 571,5 million TL oo laga dhisayo BMC Otomotiv degmada Karasu ee Sakarya [More ...]
Booqo Shirkadaha Qandaraaska
Shirkadda Sivas ee Aagga Wershadaha ee TUDEMSAS oo booqatay shirkadaha qandaraasleyda ah ee ka shaqeeya TÜDEMSAŞ Kuxigeenka Maareeyaha Guud Mehmet Başoğlu oo kulan la qaatay saraakiisha shirkada ayaa helay macluumaad ku saabsan howlaha ganacsiga. Gökyapı, oo ka mid ah shuraakadayada ganacsi [More ...]